TranLink - How to Buy
1. လက်မှတ်ဝယ်ယူရန် အတွက် ဘယ်ဘက်ရှိ လေးထောင့်အကွက်တွင် “Quick Buy” (၀ယ်ယူရန်) ကိုရွေးပါ။ Click "Quick Buy" to buy/book the ticket(s).
2. မိမိသွားလိုသော နေ့ရက်ကို ရွေးပါ။ Choose "Departure Date".
3. ထွက်ခွာမည့် မြို့ကို ရွေးပါ။ Choose "From Trip".
4. သွားလိုသော မြို့ကို ရွေးပါ။ Choose "To Trip".
5. ၀ယ်လိုသည့် လက်မှတ်အရေအတွက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ခရီးစဉ်ကို စတင်ရှာဖွေရန် “Search (ရှာရန်)” ကိုနှိပ်ပါ။ Type "Pax" you want to buy the tickets.
ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ယာဉ်လိုင်း ၊ ယာဉ်ထွက်ချိန် ၊ ခုံလွတ်အရေအတွက် ၊ ဈေးနှုန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုံတွင် မြင်တွေ့နိုင်ပါမည်။ You can see Busline, Departure Date/Time, Available Seats and Price in the following picture.
ထို့နောက် မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာခရီးစဉ်ပေါ်ကို ရွေးချယ် ( Click ) နှိပ်ပေးပါ။ And then Choose the trip that you want to travel. ပုံပါအတိုင်း ခရီးသည်အချက်အလက်ဖြည့်စွက်ရန် နှင့် ခုံ နေရာများ ထွက်ပေါ်လာပါမည်။ You can see Passenger Information Form and Seating Plan as the picture.
အနီရောင်ခုံများသည် ရောင်းချပြီး ခုံများ ဖြစ်ပါသည်။ ၀ယ်ယူရန်မရတော့ပါ။ Red Color is the sold out seats. You cannot buy these seats.
အ၀ါရောင်ခုံများသည် ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသော ခုံများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခုံများမှာ ငွေပေးချေမှုမရှိပါက စောင့်စားပြန်လည်ဝယ်ယူနုိုင်သည့်ခုံများ ဖြစ်ပါသည်။ Yellow Color is the booking seats. If there is no payment, you can buy these seats withing the waiting time.
အဖြူရောင်မှာဝယ်ယူနိုင်သော ခုံများ ဖြစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်ဝယ်ယူမှု ပြုနိုင်ပါသည်။ White Color is the seats that you can buy.
အစိမ်းရောင်ခုံများသည် မိမိဝယ်လိုသော ခုံအား ရွေးချယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Green Color is the seats that you selected.
ခရီးသည်အချက်အလက် ဖြည့်ပုံအဆင့်ဆင့် Filling the Passenger Information Steps 1. ခရီးသည်အမည် ကို ဖြည့်ပါ။ Fill the Passenger name. 2. ဖုန်းနံပါတ် ကို ဖြည့်ပါ။ Fill the Contact No. 3. NRC(မှတ်ပုံတင် ) (သို့) Passport (for Foreigner) (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) သက်ဆိုင်ရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် နံပါတ်အား ဖြည့်ပါ။ Fill NRC (or) Passport. ၂ ခုစလုံးမရှိပါက Other(အခြား) ကို ရွေးချယ်ပြီး ဖြည့်ပါ။(ဥပမာ-ဘုန်းကြီးမှတ်ပုံတင်များ) If there is no NRC or Passport, you can fill your data in "Other". 4. Pickup Place (ယာဉ်စီးချင်သောနေရာ)ကို ရွေးပါ။ Choose Pickup Place. ကျသင့်ငွေ ၊ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ယာဉ်ပုံစံတို့အား ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဖြည့်စွက်ထားမှုများကို မှန်ကန်မှု ရှိ / မရှိ သေချာစွာစီစစ်ပါ။ You can see amount, other facilities and bus model. Check the filled data carefully. 5. Book Now ပေါ်ကို နှိပ်ပါ။ Click Book Now.
ထို့နောက် အောက်ဖော်ပြပါ e-Ticket ကို တွေ့မြင်ရပါမည်။ e-Ticket အား screen shot ရိုက်ပြီး သိမ်းယူထားလိုက်ပါ။ Then you can see the following e-Ticket. Please do Screen Shot e-Ticket and Save it.
သင်၏ဘွတ်ကင်ကို စတင်ချိန်မှ ၂ နာရီကြာစောင့်ဆိုင်းပေးပါမည်။ ထို ၂ နာရီအတွင်း TranLink နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အေးဂျင့် တစ်ခုခုတွင် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ Ticketing Agents & Hotels ကို နှိပ်ပြီး နီးစပ်ရာ အေးဂျင့်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Click "Ticketing Agents & Hotels" to search the agents. ၂ နာရီကျော်ကြာ ငွေပေးချေခြင်း မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်ထွက်ရန် ၆ နာရီအလိုတွင်သော်လည်းကောင်း ဘွတ်ကင် ပျက်ပြယ်ပါမည်။ Please purchase at the nearest outlet/agent withing2hours. Unless making payment or6hours before departure time , your booking will be cancelled.
မိမိလက်မှတ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် (သို့) ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ရန် “ Check Booking ” (စစ်ဆေးရန်) ကို ရွေးချယ်ပါ။ Click "Check Booking" to check your tickets.
မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (သို့) Passport No. (for Foreigner) သက်ဆိုင်ရာတခုကို ရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် နံပါတ်အား ဖြည့်ပါ။ Check ကို နှိပ်ပါ။ Fill NRC (or) Passport. Click Check.
အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း မိမိလက်မှတ်ရဲ့ အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ You can check your ticket as the following picture.
e-Ticket (လက်မှတ်)ရဲ့ အချက်အလက်ကို သိရှိလိုပါက နာမည်ပေါ် နှိပ်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း လက်မှတ်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ Click Name to see your ticket detail. သင့်လက်မှတ်သည် စောင့်ဆိုင်းအချိန် ၂ နာရီ ကျော်လွန်သွားပါက Status တွင် Cancel ဖြစ်နေပါမည်။ If your booking is expired, Status on ticket will be Cancel.
Copyright © 2015 All Rights Reserved. MSCT Co.Ltd